Qaybinta Sii-deynta Rolling: Faa'iidooyinka iyo Faa'iido-darrooyinka | Laga soo bilaabo Linux
Qaybinta Sii-deynta Rolling: Faa'iidooyinka iyo Faa'iido-darrooyinka
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Qaybinta, Lagu taliyay
Akhriste halkan ayuu na weydiiyay Laga soo bilaabo Linux aan ka hadalno Qaybinta Sii deynta Rolling, maxay yihiin faa iidooyinkiisa iyo waxyeellooyinkiisa, haddaba waa kan maqaalkan oo aan in yar uga hadlayno mowduuca.
Qiyaas cinjir saaran gaariga markii uu horumaro, halkii aad ka daali lahayd, wuxuu hagaajiyaa oo xoojiyaa cinjirka iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo sabab kasta ha noqotee. Hadda aan ku beddelno cinjirka gaariga a Qaybinta GNU / Linux iyo caag xirmooyinkeeda.
Si aad wax yar u fahanto waxa ay Sii deynta Rolling, aan tusaale u soo qaadanno Ubuntu (taas oo sida muuqata aan lahayn muuqaalkan). Ubuntu wuxuu leeyahay sii deynta noocyo cusub 6dii biloodba mar. Waa waxa loo yaqaan qaybinta Siideynta barta, halkaas oo baakado la sii daayo waqti ka waqti.
Waqtigaas, waxaa jira cusbooneysiin marathon ah oo ah xirmooyinka cusub ee nooca dambe, sidaas darteedna waxaan soo bandhigi karnaa saddex dhibaato:
Waa inaan bedelnaa keydadka 6dii biloodba mar.
Ku rakibidda ama cusbooneysiinta nooca horay loo rakibay waxay sababi kartaa khaladaad ama dhibaatooyin hadda jira.
Xirmooyinka noocii hore ayaa si dhaqso ah u noqonaya kuwo duugoobay.
Taasi waa sababta had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad sameyso rakibo nadiif ah, laga bilaabo xoq, in kasta oo guud ahaan dadka ugu badan ay saameeyeen ay yihiin dadka isticmaala cudurka qaba cudurka 'versionitis syndrome' Marka maxaa ka dhigaya distro Sii deynta Rolling?
Aynu qaadanno archlinux tusaale ahaan. Isticmaaluhu wuu rakibayaa archlinux markii ugu horreysay umana baahnid inaad dib-u-rakibto illaa aad dhibaato daran oo xagga nidaamka ah qabtid mooyee. Markaad rakibto dhammaan xirmooyinka aad u baahan tahay, maadaama lagu cusbooneysiiyay noocyo cusub, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad ka cusbooneysiiso kaydka, oo ay ku jiraan xirmooyinka nidaamka sida Kernel.
Isku soo wada duuboo tusaale fudud. Gudaha Ubuntuu hadaad isticmaasho gnome2 con jaakooyinka, waa inaad rakibtaa mid ka mid ah (nooca dambe) in la isticmaalo gnome3. in archlinux, haddii aad rakibtay adoo adeegsanaya gnome2, kaliya adoo cusbooneysiinaya (markasta oo la heli karo cad) waad rakibi kartaa gnome3 iyada oo aan dib loo raacin nidaamka waana waxa aan ugu yeerno Sii deynta Rolling, taasi waa, qaybinta ku sii deynaysa cusbooneysiinta barnaamijka isla goobta.
Waxaad had iyo jeer heli doontaa xirmooyinka ugu dambeeyay ee la heli karo.
Looma baahna in dib la rakibo Nidaamka hawlgalka si aad u hesho xirmooyinka cusub.
Haddii xirmo kasta ay leedahay Caag, si dhakhso leh ayaa loo saxayaa, si dhakhso leh ayaad ugu rakibi kartaa xalka.
Haysashada barnaamijkii ugu dambeeyay waxay sababi kartaa dhibaatooyin ku tiirsanaanta ama khaladaad (in kasta oo ay taasi badanaa naadir tahay).
Haddii qaybinta aysan sii deyn cusbooneysiinta oo ay ku xigto kuwa .iso rakibidda, waa inaan cusbooneysiinnaa tiro badan oo xirmo ah.
Tusaalaha qaybinta Sii deynta Rolling uu Gentoo, halka, Kahel OS, Chakra, Sabayon, Saadaasha Linux. Oo akhristaha qaar ayaa isweydiin kara Iyo LMDE ma aha Sii deynta Rolling?
cunt LMDE wax aad u xiiso badan ayaa dhacaya. Qeybintaani waxay ku saleysan tahay Tijaabada Debian in kastoo ay u muuqato inay saameyn ku leedahay usbuuci, Dhab ahaan, maahan. Si loo fahmo tan, bal aan eegno khadadka ilo.list. Tijaabada Debian:
Labaduba hadda waxay u shaqeeyaan laanta Imtixaanka de Debian. Dhibaatadu waxay tahay, haddii aan isticmaalno tan ugu horreysa, goorma Qosol noqon mid deggan, mar dambe ma isticmaali doonno Imtixaanka. Si kastaba ha noqotee, haddii aan isticmaalno tan labaad, marwalba waan adeegsan doonnaa nooca Imtixaanka wareejin
Saamaynta usbuuci ku jira Tijaabada Debian xaqiiqda fudud ee xirmooyinka la cusbooneysiiyaa maalin kasta, iyo mar kasta oo aan isticmaalno Imtixaanka ma aha inaan dib u cusbooneysiino nidaamka. Laakiin farqiga ayaa ah, Tijaabada Debian kaliya cusbooneysii baakadaha ugu dambeeya ee lagu daro meelaha lagu keydiyo ee laantan, taas oo aan daruuri ahayn inay ahaato nooca ugu dambeeyay ee ay soo saartay horumariyeheeda.
Aynu mar kale tusaale u soo qaadanno Gnome. in Tijaabada Debian baakadaha Gnome 3.0 y Gnome 3.2, laakiin gooni gooni ah, ma aha Deegaanka Desktop buuxa Waxaa laga yaabaa haddii laanta Sid la isticmaalo, saamaynta usbuuci wax yar ka fiicnaada, laakiin laguma talinayo. Laakiin aan dib ugu noqonno LMDE taas oo leh keyd rasmi ah, waxayna kuxirantahay midka aan isticmaalno, waxaan dareemeynaa dareenka inuu yahay usbuuci o maya.
Sikastaba, waxaan rajeynayaa inaan wax yar ka cadeeyay mowduuca. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u maleyneyso inaan wax ka maqanahay, ama aan qalad ku jiro, ka tag faalladaada 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Qaybinta Sii-deynta Rolling: Faa'iidooyinka iyo Faa'iido-darrooyinka
Tani waa waxa loogu yeero qaybinta Siidaynta Qodobka
Miyaanay ahayn sii deynta baaskiil?
Haddii qaybintu aysan bilaabin cusbooneysiinta oo ay ku xigto rakibidda .iso, waa inaan cusbooneysiinnaa tiro badan oo xirmo ah.
Uff, tani waa dhibaato aad ka xishooto. Hal shay oo aad sameyn kartid intaad cusbooneysiineyso waa inaad lugeeysatid saaxiibkaa, ama KZKG ^ Gaara oo wuxuu sharxayaa in Arch uu yahay cadaabta hahaha
Siideynta dhibic, sii deynta bushkuleeti ... waxaa sidoo kale loo yaqaan Qaboojiye
Dhab ahaan !!
Waan aqaan isaga sida Siideynta barta.
Yup ... taasi waa qodob taban, inkasta oo aakhirka macno badan samaynaynin, maxaa yeelay Rolling waa isku mid, ISO si dhakhso ah ayaa loo joojin doonaa 😉
... Uff, tani waa dhibaato aad ka xishooto. Hal shay oo aad sameyn kartid intaad cusbooneysiineysid waa inaad lug ku lugeeysid saaxiibkaa, ama KZKG ^ Gaara oo wuxuu sharxayaa in Arch uu yahay cadaabta hahaha
hahahahahahahahahahaha waan ku qoslay that. Hahaha
Waxa kale oo muhiim ah in la yiraahdo guud ahaan noocyada Rolling-ka lama tirin karo ... tusaale ahaan Arch waa Arch oo keliya, ma jiro Arch 10.04 ama Arch 10.10 sida Ubuntu ... laakiin waa rogid
Nolol Nadiif ah
Dhab ahaan, in kastoo la tirin karo, kaliya si loo qeexo wareegyo muhiim ah. Laakiin si kastaba ha noqotee, waad saxantahay
Sharaxaad wanaagsan, tan kama aanan ogeyn Sabayon. Tusaalaha (oo ku saleysan Arch) ma laha nooc sidoo kale, sax? Laakiin ... maahan in Mashruuca Chakra uu leeyahay?
Salaan iyo mahadsanid faallooyinkaaga 😀
Chakra haa, laakiin waxaan fahamsanahay inaysan rogrogmi karin, ee ay tahay kalabar rogid
Waa maxay farqiga u sameeyaa? Waa Rolling 😛
Geesinimadu waa sax waa kalabar rogid, ma rogeyso. Noocyada cusubi waxay marka hore maraan repo aan degganeyn ka dibna tijaabinta.
Chakra way rogeysaa, lambarka ay heysato waa shaashado, taas oo ah, sawirkii ugu dambeeyay ee la daabacay ee gobolka ee ay 'distro' ay ku go'aamineyso daqiiqadda ... xilligan la joogo waa nooca Sebtember waana sababta ay u leedahay Chakra 2011.09 (magaca edn ). Sikastaba, Chakra waxay isku dayeysaa inay ilaaliso .iso casriyaysan, marka rakibida cusubi maahan inay waxbadan cusbooneysiiso
Haa haa, waxay la mid tahay waalidkeed distro: Arch 🙂
Waad ku mahadsantahay cadeynta 😉
Maqaal aad u fiican, wuxuu baabi'inayaa waxyaabo badan oo aan ka walaacsanaa oo ku saabsan qaybinta; laga yaabee inaad hadhow isku daydo nasiibkaaga arch.
Salaan iyo mahadsanid macluumaadkan, waxay faa'iido badan u leedahay dadka cusub ee aniga oo kale ah.
Maya gabi ahaanba, waa farxad inaan ogaado inaan ku caawinayno.
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow bartayada hoose humble
Waxaan ahaa isticmaale Suse, Fedora, Openuse, Mandrake, Mandriva, Ubuntu, Debian, Linux Mint, Gentoo,…. iyo ArchLinux, iyo waayo-aragnimo ku saabsan wareejinta distro ama wax kasta oo aad rabto in loogu yeero, ma aanan qabin wax dhibaatooyin ah oo ku tiirsanaan, dhab ahaantii waxaan la kulmay dhibaatooyin badan oo ka cusbooneysiinta hal taxane Ubuntu illaa mid kale marka loo eego ArchLinux, halka aan joogo, tusaale ahaan. Nasiib darrose haddii Ubuntu uusan sii deynin noocyada 6-dii biloodba mar, ma jiri doono wax war ah oo ku saabsan nooca cusub, mana noqonayso mid "POPULAR" ah, rikoodhkana anigu ma dhaleeceynayo, waa hab fudud oo kor loogu qaadayo nafteeda (suuq nadiif ah), waxaan u leeyahay maxaa yeelay Blogs wax ka badan ma akhriyo, in haddii Oneiric uu X maalmood u jiro, in haddii mar horeba la bilaabay, in haddii ay tahay beta, si fiican ayaan u maleynayaa inaan sharxayo, sax?
Waxa runta ah waa inay, aniga ila tahay, inay kala fogeeyaan noocyada kala duwan, tusaale ahaan mid keliya oo aan laba ahayn sanad kasta (waa aragtideyda)
Inbadan waxay dhahaan maxaa yeelay way rogayaan waxay yihiin kuwo aan xasilooneyn, laakiin runtu waxay tahay in khibradeyda MY ay iisheegtay taas ka soo horjeedkeeda, waxaan soo bandhigayaa xasilooni daro ka yar Arch sidii aan ku qabay Ubuntu, ama Debian markii Imtixaanku ahaa Tuujin.
Haa, waa run, Ubuntu oo leh meertada gaaban ee horumarineed ayaa had iyo jeer soo jiidata fiiro badan, taas oo runtii aniga i dhibaynin ama aniga oo kale ah ... kaalay, anigu dan kama lihi 🙂
Oh jidka agtiisa, KU SOO DHAWOW boggayaga 😀
Waad ku mahadsantahay soo dhaweynta iyo salaanta
Tan waxaan ku rajaynayaa akhristaheenna (Ciise) inuu ku faraxsan yahay 🙂
By habka, haddii qof doonayo wax gaar ah in laga wada hadlo, waxay noo sheegi kartaa iyada oo loo marayo foomka xiriirkeena: https://blog.desdelinux.net/contactenos/
Aad baad u mahadsantahay! Maqaalkani wax badan buu i caawiyey.
Waad ku mahadsantahay sida aad ugu dhawaatay isla markaana aad u kordhisay shakigaaga.Wax kastoo aan kari karno, marwalba waan caawin doonnaa
Salaan. Aan su’aal weydiiyo. Nice la shaqee baloogga.
Maxay yihiin waxyaabaha loo sii daayo Rolling DEBIAN? Waxaan ula jeedaa kuwa ay garaaceen koox ka mid ah, sida Canonical.
PS: iyo maadaama aan nahay ... iyo Fedora?. Imtixaanka Debian 6 wuxuu ka koobnaan doonaa Gnome 3 horey…. Miyuu xasilloonaan lahaa ugu yaraan heerka Ubuntu? Kaliya waa waxaan rajeynayaa inaan furo Ubuntu maxaa yeelay wax kasta oo ay qabanayaan waxay ku wajahan yihiin Midnimada, mana iibsan.
Waad salaaman tahay, hadaan khaldanahay, wiilashu way i saxaan, laakiin LMDE waa wax la mid ah sida loo rogo codka Debian, waxa kale ee xiisaha kuu leh waa Debian CUT, halkan waxaa ku yaal maqaal ku saabsan midka ay qoreen kooxda balooggan https://blog.desdelinux.net/disponible-snapshot-debian-cut-2011-10rc1/
yep L .LMDE waa wax fudud Debian Tijaabinta farshaxanka ee Linux Mint horumarineed… waxay qaadaan Tijaabin debian ah waxay dhigayaan Mint-Updater, Mint-menu, mawduuca gtk, wallpaper iyo voila in .marka yar waxay kaliya ka dhigayaan inay arkaan wax badan quruxsan, laakiin iyagu runti wax muhiim ah kuma hayaan iyada. hadaad debiskaaga qaadatid isla markaana aad dhigeyso isla wallpaper iyo gtk mawduuca waxaad horey u laheyd LMDE hehe laakiin waa inaad ku faantaa inay tahay saafi Debian xD
xasilloon heerka ubuntu?
fiiri, Ubuntu waxay noqon laheyd wax la mid ah nooc alfa ah marka la barbar dhigo xasiloonida Debian, xasilloonidaasi waxay Debian ka dhigeysaa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo adeegsado qashinka.
ma rabtaa inaad ka takhalusto ubuntu? Aad u fiican, waan ku dhiirigelinayaa, kama qoomameyn doontid ... Waxaan kuugu ballan qaadi karaa inaadan dib ugu laaban doonin iyada
Waxaan qiyaasayaa inaad dareentay macho badan adeegsiga "saafi" debian ... pppffff
Oops ... waxaad ka mid tahay kooxda jilicsan ee Linux ... raali ahaw, ma aanan qiyaasin ... laakiin u qaado dhaliil wax ku ool ah adiga iyo saaxiibbadaada ...
Ujeeddadaydu ma ahayn inaan dhaawac u nuglaado
Ah waan ilaaway ... iskuma dayin inaan qalloociyo faalladaada, laakiin waxaan rabay inaan xaqiijiyo inay tahay nooca debian-ka loo habeeyay. Laakiin inaan ra'yigayga ka dhiibto in kaliya lagu dhejinayo sharraxaadda, ee aan lagu shaqeynin
Mar labaad, waan ka xumahay isfaham la'aanta
Haye, anigu kama mid ahay kooxda Linux Mint, kaliya waan necbahay faallooyinka wiilka.
Wow wixii aan ku arko Wax walba oo halkan ku yaal wuxuu adeegsadaa Arch, GEnial
Waxaan sidoo kale isticmaalaa Arch, kan ugu fiican Distros. Waxa kale oo aan soo maray dhowr distros, U, F, Man, D, OpnS, iwm.
Marka la sii daayo, Arch Ha waa tan kaliya ee aan waligey isticmaalay
Furitaanka Wareegga OpenSuse iyo Fedora way fiican yihiin
YEAH !!!, waxaa jira dad badan oo inaga mid ah oo isticmaala Arch ... haha, halkan inbadan oo naga mid ah ayaa dhadhan fiican leh 😉
Ku soo dhowow boggeena, waxaan rajeyneynaa in waxyaabahayagu ay yihiin kuwa aad jeceshahay 😉
Salaan iyo markale, soo dhawow 😀
Maya, dhamaanteen ma wada isticmaalno Arch ¬¬
Sure, ka reebitaanka oo caddaynaya xeerka
hehe, hada hadaad isticmaasho Arch, inkasta oo waagaas elav la isticmaalay Debian.
Ah, intee in le'eg ayey tahay inaad maal gashato si aad u cusbooneysiiso, marka hore barta sii deynta / sii-deynta baaskiil wadista waa inaad kala soo baxdo iso-ka cd / dvd. markaa inta lagu guda jiro rakibaadda waxay ku weydiinayaan inaad soo dejiso megabeytyo faylal ah.
Kadibna RR-ga ayaa la rakibay hal jeer, sidaa darteed cusbooneysiinta weyn ee bilowga, lama soo celin doono inaad dib u rakibto mooyaane, haddii ay tahay inaad dib u rakibtona waa sababta oo ah waxaad bilowday tijaabinta oo waad xoqday wax mana awoodid ama ma jirto hab loo tuuro. gadaal. Sannaduhu way mari karaan iyada oo aan dib loo rakibin, halka dhibic sii deynta / sii deynta baaskiilku ay tahay inaad soo degsato isos kasta oo ah 6, 8 ama 12 bilood kasta oo haddii aad cusbooneysiiso, haddii kale waxay ku siinaysaa khaladaad (badanaa wax macno ah ma leh) wali waa inaad soo dejiso waxyaabo badan cusbooneysiinta, oo RRs aad si tartiib tartiib ah u soo dejiso. Si kale haddii loo dhigo, "khasaaro" lafteeda maahan oo inta badan RR waxaad ka heli kartaa sawirro dhowaan soo kordhay ee isos.
Hoygan que buelbe centpre la vurra al wheat oo leh waxyaalahan.
Waa wax laga xumaado inaad ka dhigtay weedhaas sharad hoygan ¬¬
Su'aal aniga igu soo dhacda, waxaan aqrinayay qeexitaannada sabayoon 8 oo waxay wax ka sheegaysaa sii-deynta xad-dhaafka ah, maxay ka dhigan tahay fikraddaasi? waad ku mahadsan tahay horay laakiin waan xiiseynayaa, habka, bogga weyn, waan jeclahay
Sharaxaaddu way dhammeystirtay, waxay iga saartay shaki kasta.
Chakra kala badh bay rogaysaa hubi xiriiriyeyaas ^ __ ^
(http://chakra-linux.org/wiki/index.php/Chakra_Linux) iyo (http://chakra-project.org/bbs/viewtopic.php?id=7091)
Waxaan u isticmaalaa daabacaadda Jagger, riwaayad si fiican loo rogo dist 🙂
Sida inbadan oo idinka mid ah, waxaan soo maray dhowr jeer tan iyo bilawgii Linux, tan iyo markii aan helay "Chakra Linux", waan ku faraxsanahay distoorkan, xasiloonida waa mid cajiib ah, wax dhibaato ahna kuma qabin mid ka mid ah 3-da mashiin ee Waxaan rakibay, 100% ogaanshaha qalabka wax ku oolka ah (macsalaamey dhibaatooyinkeyga ku saabsan Broadcom 43xx), cusbooneysiin joogto ah, iwm.
Intaas waxaa sii dheer, nidaamka xirmooyinka ayaa kuu oggolaanaya inaad haysato codsi kasta oo GTK ah iyo CCRs, qaar badan oo ka mid ah kuwa aan ku jirin goobaha rasmiga ah. Sidoo kale farshaxanka-cusub ee «Dharma» waa mid cajiiba !!!
Waxaa macquul ah berrito, khibrad dheeri ah (iyo geesinimo dheeri ah, maxaa diidaya inaad dhahdo) waan ku dhiiran karaa Arch, laakiin hada waxaan la joogayaa Chakra
Waxaan u adeegsadaa ManjaroLinux, oo ku saleysan qaanso (taasi waa, waxaan bilaabayaa inaan tijaabiyo) si daacad ah, waan jeclaaday, aad u dhakhso badan, fudud oo ka sarreeya wixii la cusbooneysiin karo.
haye! Waxaan rabay inaan ogaado sida ay ku dhacday Manjaro. Runtii waxaan rabaa inaan badalo linux 12, maahan wax gaar ah maxaa yeelay distroorkeygii ugu horeeyay ... sida aad ubogto waxaan ahay digaag kumbuyuutar ah oo sifiican ayaan ufahmayaa liiska.
Waxaan akhriyay waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan Manjaro iyo Linux Mint, sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa fikirkaaga ku saabsan xasilloonida, iswaafajinta barnaamijyada iyo wixii la mid ah
Waxa kale oo ku yaal Ubuntu xarun softiweer oo aad ii anfacday oo aan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay ku dhex jirto dhammaan distros
Ku jawaab yoshy
Waxaan u arkaa dhibaatada khaladaadka ku tiirsanaanta inay ahaato mid xoog badan markaan cusbooneysiinayo xirmooyinka cusub, ma aqaano haddii aan si sax ah loo tijaabin ka hor inta aan la siidaynin ama tayada tayada ay hooseyso. Waan ku kala duwanahay "waxay u egtahay mid la yaab leh", waxaan ka helnay barxadaha Arch iyo Manjaro qoraallo badan oo ku saabsan. Wax badan ayaan la boodayaa Manjaro oo xayaysiiya sahlanaanta isticmaalka, laakiin markaad dhibaato ku tiirsanaato oo aadan ahayn isticmaale daneynaya inuu nidaamka si fiican u galo, waxa ugu fudud ayaa ah in dib loo rakibo.
Waxaan u arkaa qaabka horumarinta Ubuntu inuu yahay mid joogto ah oo xasilloon, oo waxaan u arkaa haddii aanan jeclayn wax walboo disto ah inay tahay oranji.
Uma arko barta RR xilligan, uma bislaansho ku filan ama waa aniga.
Ku jawaab VELASCOSO
saaxiib waxaan u maleynayaa in maqaalka la jabsaday:
Waan ka faa'iideysanayaa oo waxaan ku weydiinayaa, muddo dheer ayaan isticmaalaayay Linux 14 Mint, laakiin waxaan hayaa cayayaan aanan xallin karin, marka waxaan ka fikirayaa inaan u dhaqaaqo sii deynta sii socota, cabsida aan qabo ayaa ah dhibaatooyinka suurtagalka ah ee qalabka iyo / ama dhinacyada
Waan ku faraxsanahay faallooyinkaaga
Waxaa jira wax yar, tusaale ahaan PCLinuxOS
Ku jawaab RPMDEB
Sida loo helo amarkaas aad ku soo gashay garoonka dhexdiisa
Waan ka cudurdaaraneynaa